Laser fibre fanapahana masinina orinasa - mpanamboatra milina fanapahana laser fibre, mpamatsy
Masinina fanapahana laser 1325
Masinina fanapahana laser 1390
Masinina fanapahana laser 6090
Masinina fanapahana lozisialy CNC
Masinina fanaovana sokitra hazo 1325
1530 Masinina fanapahana làlambe CNC
Masinina fanapahana router 6090 CNC
Masinina manapaka plasma
1530 Masinina manapaka plasma
Masinina manapaka plasma 1560
2060 Masinina manapaka plasma
2060 Laser fibre fanapahana milina
3015 Laser fibre fanapahana milina
4515 Laser fibre fanapahana milina
Masinina fanamarihana fibre
Masinina laser 6090
1610 Masinina tamin'ny laser
3015 fibre laser manapaka Ma ...
Masinina tamin'ny laser 1325
Masinina tamin'ny laser 1390
SK-GL fibre laser cutting machine dia vokatra matotra amin'ny indostrian'ny fanodinana laser miaraka amin'ny fitaovana mitarika ao amin'ny indostria ary mahatratra ny ambaratonga iraisam-pirenena. Ity andiana vokatra ity no safidy voalohany amin'ny indostrian'ny fanodinana fitaovana vy. Izy io dia manana fahaizana manapaka mahery vaika, "manidina" haingam-pandeha, ambany ny vidiny, azo antoka tsara, manodina kalitao avo lenta ary mahay mampifanaraka. Masinina haingam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha hazavana, fitaovana fanapahana vy. Famokarana tsy manam-paharoa sy fahamendrehana fanodinana.
SK-GL fibre laser cutting machine dia vokatra matotra amin'ny indostrian'ny fanodinana laser miaraka amin'ny fitaovana mitarika ao amin'ny indostria ary mahatratra ny ambaratonga iraisam-pirenena. Ity andiana vokatra ity no safidy voalohany amin'ny indostrian'ny fanodinana fitaovana vy. Izy io dia manana fahaizana manapaka mahery vaika, "manidina" haingam-pandeha, ambany ny vidiny, azo antoka tsara, manodina kalitao avo lenta ary mahay mampifanaraka.
Masinina haingam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha hazavana, fitaovana fanapahana vy.
Famokarana tsy manam-paharoa sy fahamendrehana fanodinana.